जवान मन्, अधबैँसे उमेर – मझेरी डट कम
“हाँहाँ…सबको अगाडि लाज लाग्ने गरी भन्ने हो त, एकान्तमा भेटै नहुँने गरि? कस्तो ‘सेम टु यू’ पनि भन्न नपाई छुटिनुपर्यो… ‘एनिवेज् ढिलै भएतापनि आई लभ यू सो मच है!” – म्यासेजसँगै पान खाएर थुकेजस्तो पानकै पात आईपुग्यो।
‘लभ गर्ने उमेरपनि घर्कीसकेछ! मन भन्दा समय छिटो भो भगवान्!’